Brezila, Mahavita Dingana Alohan’ny Hiantombohan’ny “Fiadiana ny ho Tompondaka Erantanin’ny Aterineto”: Nankatoavin’ny Antenimieran-doholona i Marco Civil · Global Voices teny Malagasy
NETmundial, faritana ho toy ny "Amboara erantanin'ny Aterineto"
Voadika ny 22 Avrily 2019 8:49 GMT
Vakio amin'ny teny Español, English, Português, عربي, বাংলা, English
Iray andro nialohan'ny NETmundial, hetsika erantany ho an'ny fitantanana ny Aterineto ampiantranoin'i Brezila, nankatoavin'ny Antenimieran-doholona Breziliana ny Sata tsy mbola nisy toa azy momba ireo zon'ireo mpampiasa Aterineto, fantatra amin'ny anarana hoe “Marco Civil”. Eo ampelatanan'ny prezidà Dilma Rousseff sisa ankehitriny ny fanapahana farany. Araka ny voalazan'ny fanambaràna an-gazety iray [pt] nataon'ny Antenimieran-doholona, ilay fankatoavana haingana, tsy nasiam-panitsiana, dia natosiky ny fieritreretana hoe ” mandritry ny NETmundial, ho lasa lalàna ilay volavolan-dalàna”, NetMundial izay manomboka ny 23 Aprily 2014 ao São Paulo.
“Mety hanana fiantraikany toy ny rivo-panavaozana ny tontolo politikan'ny Aterineto amin'izao fotoana izao ny Marco civil”, hoy ny tonian-dahatsoratry ny Global Voices Advox, Ellery Biddle, nanoratra, taorian'ny fankatoavana ny volavolan-dalàna tao amin'ny Chambre basse an'ny Kongresy, tamin'ny 25 martsa. Tonga eo amin'ny kihon-dalana i Brezila amin'ny fitazonana andraikitra fisavàna làlana amin'ny famaritana an'ireo politika momba ny Aterineto. Ny dingana fandraisana anjara napetraka ho an'ny famoronana sy ny adihevitra amin'ilay volavolan-dalàna – “natosiky ny tombontsoan'ny daholobe”, mifanohitra amin'ny tombontsoan'ireo orinasa na ny governemanta” – dia azo antoka fa manampy fomba fijery amin'ny fihaonana iraisampirenana mikasika ny hoavin'ny fitantanana ny Aterineto izay mamondrona ny mpisolo tena an'ireo governemanta, ireo mpanapaka hevitra sy ireo vondrona orinasa sivily eran-tany, amin'ny 23 sy 24 Aprily.
Ilay Venezoelana mpisolovava sady mpanoratra, Diaz (@mariannedh), izay tao São Paulo mba handrakotra ny hetsika, no mamaritra ny NETmundial ho toy ny “Amboara erantanin'ny Aterineto“, tao anatin'ny lahatsoratra iray savaravina ho an'ny Advox.org. Vao manomboka mihitsy ireo lalao.
Miisa 33 ireo vona fandraisana anjara avy lavitra ao amn'ireo firenena 23 ary ho alefa eo amin'ny tranonkala NETmundial.br. Araho ny @NETmundial2014 eo amin'ny Twitter sy ny tenifototra #NETmundial2014 hahazoanao ireo fanavaozana.